Umngcipheko ayisiyiyo ingqalelo, ngumxholo | Martech Zone
Ingozi ayisiqwalaselo, ngumxholo
NgoMvulo, Septemba 2, 2013 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Sibe nodliwanondlebe oluhle noMark Schaefer kwi-podcast yethu malunga neposti yakhe, I-physics yemidiya yoluntu ibulala njani iqhinga lakho lokuthengisa. UMark unika ubungqina bokuba yonke inkampani kufuneka isebenze ekunikezeleni umxholo omangalisayo, umthamo ophakamileyo womxholo oxabisekileyo kunye nokuhambisa umxholo apho abaphulaphuli bakhoyo.
Mamela kudliwanondlebe lwethu noMark Schaefer
Abanye abantu bakubiza oku kungumxholo omncinci kunye nezinye izinto ezixabisekileyo. Kukho ukuqhuma kwalo mxholo enkosi kwii-mediums ezibonakalayo njengePinterest, Instagram kunye noMdiliya. Ngenxa yoku kukhula komxholo okwetyiwa ngokulula, intsomi eyasasazwa kwintengiso nganye nakwi-intanethi yile Ukuqwalaselwa kwabathengi kuya kufutshane. Imisebenzi emininzi, iziphazamiso, i-imeyile, umnxeba, iiapps… yonke loo nto kufuneka isuse ukugxila kwimisebenzi esetyenziswayo.
Ayisiyo i-BS kwingcebiso kaMarko, endikholelwa ukuba iyabonakala. Ndibiza i-BS ukuba ixesha lokuqwalaselwa kweshishini eliqhelekileyo okanye umthengi liyancipha. Ndiyakholelwa ukuba ixesha lokuqwalaselwa kunye nokugxila kukhulu kunangaphambili. Ndiyakholelwa ukuba abathengi basebenzisa uphando, imithombo yeendaba zentlalo kunye nezixhobo ukuze babe nokufumana ulwazi ngakumbi kunangaphambili. Kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, khange sibenalo ithuba lokufumana kwaye siphandisise ngokucokisekileyo ukuthengwa kwethu okulandelayo kwintende yesandla. Kwafuneka sithembele kwiingcali zentengiso kunye nezinto zokuthengisa zodwa. Ukuthengwa kunye nezigqibo zenziwa ngokuthembana kokuxhawulana kwaye ngamanye amaxesha kuncinci.
Ngeentsuku ze-Intanethi kwi-Intanethi, kwakusaziwa njenge ulwazi lwendlela. Isizathu sasilula… ulwazi oluninzi olukhoyo ngaphakathi kweemilisekondi. Kubathengisi, oku kubaluleke kakhulu. Kule veki iphelileyo, kuye kwafuneka ndifumane inkqubo entsha yolawulo lwentengiso kwibhlog yam emva kokuba eyokugqibela iyekile ezinye izinto eziphambili. Emva kwemizuzu embalwa, bendinoluhlu olucokisekileyo lwamaqonga. Emva kweeyure ezimbalwa, ndakwazi ukuphanda ukuba zeziphi ezineempawu endizifunayo. Kwaye kwiintsuku ezimbalwa, ndand kuvavanye nganye. Isiphumo kukuba ndafumana iqonga elinazo zonke izinto endizifunayo ngaphandle kokuthetha naye nabani na okanye ndityikitya nasiphi na isivumelwano.
Ayikho enye iprojekthi eyayiqwalasele ngelo xesha. Bendingekho kuFacebook nakuTwitter. Bendingaphenduli iminxeba. Ingqwalaselo emfutshane? Ayilothuba. Oko kwathethi, uninzi lweendawo endandindwendwele kuzo zindilahlile. Amaxwebhu angalunganga, ukujonga ngokubanzi iividiyo, iinkqubo zobhaliso ezinzima, akukho lwazi loqhakamshelwano… zonke ezi zithintele amandla am okufumana imeko endiyifunayo ukwenza isigqibo.
Abanye abathengisi basebenzisa ukugxila kunye nomxholo ngobuqhetseba kwinzuzo yabo. Umzekelo wesifundo esiphakathi, umzekelo, ukhomba kumthengi onezona ziphumo zibalaseleyo ngemveliso okanye ngenkonzo ethengisiweyo, ongazinanziyo ezinye izinto ezinegalelo, kwaye angaze athethe ngabathengi ababeneziphumo ezibi. Iziphumo kukuba umthengi okanye ishishini elenza isigqibo sokuthenga lishiyeke lihlalutye ulwazi kwaye libone ukuba sisigqibo esifanelekileyo sokuthenga.
Abafundi bashiyeka ukuba bavelise umxholo wabo ngeenxa zonke iinyani ozinikezile. Oku kunokukhokelela kulindelo oluphosakeleyo kwaye kunokuvelisa izikhokelo ezingalunganga kumbutho wakho.
Isitshixo sengcebiso kaMark nantsi ukubonelela ngomxholo omangalisayo KUNYE nokugcina umgangatho womxholo ngelixa uyenza ukuba icoleke ngakumbi. Kwiindawo ezigabadeleyo, lo ngumsebenzi we uyilo olukhulu olunobumba. Uninzi kakhulu lwe-infographics yitoni yezibalo ezibethwe kwimizobo entle. Kodwa ezona infographics zibalaseleyo ziphuhlisa ngokubanzi ibali ukuba imizobo kunye namanani ngaphakathi kwenkxaso.
I-Twitter xa ithelekiswa neBlogging
Uninzi lungafuna ukuba ukholelwe ukuba lo ngumahluko phakathi kweTwitter kunye nokuBloga… ukuba iTwitter yeyomsebenzisi osilelayo kwaye ukubhloga kubonelela ngemeko esiyifunayo. Ndingatsho ukuba i-Twitter ibaluleke kakhulu ngenxa yomxholo eveliswayo. Kuyo nayiphi na inkampani, umsebenzisi, isihloko, uhlaziyo okanye i-hashtag, i-Twitter ivelisa iingxoxo kunye nokunxibelelana ngokufanelekileyo ukunika imeko oyifunayo. Iiapps ezinje ngeVini kunye ne-Instagram azinakho ukudibanisa umxholo onzulu- kodwa ndiyakholelwa ukuba oko kuza (ngakumbi njengoko becela intengiso).
Sukuba nexhala lokujonga ingqalelo komfundi. Ungayikhathaleli into yokuba ubonelela ngexabiso elikhulu kunye nomxholo opheleleyo ophuculweyo kwaye uncitshisiwe kweyona nto isebenzayo, esebenzayo, kunye nemithombo yeendaba ephathekayo enokwenzeka.
tags: ixesha lokujongaUkuThengiswa kweMpahlankcukachangempumeleloUkusebenza kakuhleJoliseLula
Uncedo lweScout: Yongeza iiNkonzo zabaThengi ezinokuSasazeka kwiSiza sakho
Sep 2, 2013 ngo-11:56 PM
Kuya kufuneka siqinisekise ukuba umxholo wethu uya kufikelela kubaphulaphuli esijolise kubo ngokusetyenziswa kwezinto ezahlukeneyo
izixhobo.Kodwa kufuneka sikhumbule kwakhona ukuba umxholo womgangatho olungileyo yeyona nto iphambili kwimpumelelo yephulo lethu.
Sep 3, 2013 ngo-11:23 PM
Andikwazanga ukuvuma ngakumbi. Nyhani ke bendincokola nomntu namhlanje. Bathi “jonga indlela uGodin abhala ngayo” ndaza ndaphendula ndathi, “oko kufana nokuthi ‘jonga indlela iHarvard eyinyusa ngayo imali.’”
Zombini zingaphandle. Umxholo oqinileyo, oxhokonxa iingcinga, onika umdla UYA kutsala umdla wabantu.
Ukhona. Enkosi ngale nto. Umlandeli omkhulu kaSchaefer (ukususela kwisithuba sakhe apha-http://www.businessesgrow.com/2013/04/16/three-dazzling-examples-that-turned-online-influence-into-offline-results/ )
ngokunjalo, sijonge phambili kwipodcast…ubungqina obuninzi benqaku lakho!